Kupararira fekitori - China Kupararira Vagadziri uye vanotengesa
ultrasonic viscous ceramic slurry inosanganisa homogenizer
Iko kushandiswa kukuru kweiyo ultrasonic kupararira mune slurry indasitiri ndeyekuparadzira nekunatsa kwakasiyana siyana kweiyo ceramic slurry. Simba re20,000 nguva pasekondi inogadzirwa neiyo ultrasonic vibration inogona kudzikisira saizi yezvakasiyana zvikamu zve pulp uye slurry. Iyo yekuderedza saizi inowedzera nzvimbo yekutaurirana pakati pezvimedu uye iko kusangana kuri padyo, izvo zvinogona kuwedzera zvakanyanya kuomarara kwepepa, zvinowanzoita kucheneswa uye kudzivirira watermark uye kutyora. Ultrasonic iri ...
China Ultrasonic textile dhayi homogenizer
Iko kushandiswa kukuru kweiyo ultrasonic homogenizer muindasitiri yemachira ndiko kupararira kwemachira emachira. Ultrasonic mafungu anokurumidza kuputsa zvinwiwa, zvinomiririra uye zvinosangana ne20,000 kudedera pasekondi, nokudaro zvichigadzira yunifomu yekupararira mune dhayi. Panguva imwecheteyo, zvidimbu zvidiki zvakare zvinobatsira dhayi kuti ripinde mukati mefibre pores yemucheka kuti ikurumidze kupenda. Iko kusimba kwemavara uye kutsanya kwemavara zvakagadziridzwa zvakanyanya. ZVINONYANYA: MUENZANISO JH1500W-20 ...
Ultrasonic bepa pulp yakapararira muchina
Iko kushandiswa kukuru kwekupararira kweiyo ultrasonic mupepa indasitiri ndeyekuparadzira nekunatsa akasiyana siyana epapepa pulp. Simba re20,000 nguva pasekondi inogadzirwa neiyo ultrasonic vibration inogona kudzora saizi yezvakasiyana zvikamu zveiyo pulp. Iyo yekuderedza saizi inowedzera nzvimbo yekutaurirana pakati pezvimedu uye iko kusangana kuri padyo, izvo zvinogona kuwedzera zvakanyanya kuomarara kwepepa, zvinowanzoita kucheneswa uye kudzivirira watermark uye kutyora. ZVINONYANYA: ADVANTA ...
20Khz ultrasonic kabhoni nanotube kupararira muchina
Carbonnanotubes akasimba uye anochinja asi akabatana kwazvo. Izvo zvakaoma kuti zvipararire kuva zvinwiwa, senge mvura, ethanol, mafuta, polymer kana epoxy resin. Ultrasound inzira inoshanda yekuwana discrete - imwechete-yakapararira - carbonnanotubes. Carbonnanotubes (CNT) anoshandiswa mune zvinonamatira, kupfeka uye mapolymers uye semagetsi anoitisa mafirita mumapurasitiki kudzikisa zvimisikidzo zvemagetsi mumidziyo yemagetsi uye nemagetsi emagetsi epombi emagetsi emagetsi. Nekushandisa nanotu ...
20Khz ultrasonic pigment kupfeka pende inoparadzira muchina
Ultrasonic ichipararira inzira yemuchina yekudzikisa zvidiki zvidiki mumvura kuitira kuti zvigoita zvakaenzana zvidiki uye zvakaenzana zvakagoverwa. Kana michina yekuparadzira ye Ultrasonic ichishandiswa se homogenizers, chinangwa ndechekuderedza zvidimbu zvidiki mumvura kuti uvandudze kufanana uye kugadzikana. Izvi zvidimbu (zvinopararira chikamu) zvinogona kunge zviri zvakaomarara kana zvinwiwa. Kuderedzwa kwehuremu hwepakati hwezvimedu kunowedzera huwandu hwezvimwe zvikamu. Izvi zvinotungamira pakuderedzwa kweaver ...
ultrasonic wakisi emulsion yakapararira inosanganisa michina
Wax emulsion ine akasiyana mashandisirwo, inogona kuve inosanganiswa nezvimwe zvinhu zvekuvandudza mashandiro ezvigadzirwa. Zvakaita se: wax emulsion inowedzerwa kupenda kunatsiridza kunamatira kwepende, wakisi emulsion inowedzerwa kuzvizoro kugadzirisa mamiriro asina mvura ezvekuzora. Kuti uwane emulsions yewax, kunyanya nano-wax emulsions, yakasimba-simba rekucheka simba rinodiwa . Iyo ine simba micro-jet inogadzirwa neiyo ultrasonic vibration inogona kupinda mukati meaya maarticles kusvika kune nanometer nyika, ...
Ultrasonic silica yakapararira michina
Silica ndeye akasiyana-siyana zvedongo zvinhu. Iine magetsi ekudzivirira, yakanyanya kupisa kupisa, uye kupfeka kuramba. Inogona kuvandudza mashandiro ezvinhu zvakasiyana siyana. Semuenzaniso: Kuwedzera silika kune iyo yekumonera kunogona kuvandudza zvakanyanya kudzvinyirira kuramba kweiyo kupfeka. Ultrasonic cavitation inogadzira isingaverengeke madiki matema. Aya matobvu madiki anogadzira, anokura uye anoputika mune akati wandei mabhendi mafungu. Maitiro aya achaburitsa akanyanya mamiriro emunharaunda, senge yakasimba shear simba uye microjet. Iyo ...
Ultrasonic tattoo inks akapararira michina
Tattoo inks inoumbwa ne pigments inosanganiswa nevatakuri uye inoshandiswa kumatato. Tattoo inki inogona kushandisa akasiyana mavara eateki inki, anogona kudzikiswa kana kusanganiswa kugadzira mamwe mavara. Kuti uwane kuratidzwa kwakajeka kweturuvara, zvinofanirwa kuti uparadze iyo pigment muingi neyakaenzana. Ultrasonic kupararira kwe pigments inzira inoshanda. Ultrasonic cavitation inogadzira isingaverengeke madiki matema. Aya matobvu madiki anogadzira, anokura uye anoputika mune akati wandei mabhendi mafungu. T ...
Ultrasonic nanoemulsions zvigadzirwa zvekugadzira
Nanoemulsions (CBD emulsion yemafuta, Liposome emulsion) iri kuwedzera kushandiswa mumaindasitiri ekurapa uye ehutano. Iko kudiwa kukuru kwemusika kwakasimudzira kuvandudzwa kweanoshanda enanoemulsion yekugadzira tekinoroji. Ultrasonic nanoemulsion yekugadzirira tekinoroji yakaratidza kuve ndiyo yakanyanya kunaka nzira parizvino. Ultrasonic cavitation inogadzira isingaverengeke madiki matema. Aya matobvu madiki anogadzira, anokura uye anoputika mune akati wandei mabhendi mafungu. Maitiro aya achaburitsa akanyanya mamiriro emunharaunda, senge akasimba s ...
Ultrasonic Graphene Kuparadzira Midziyo
Nekuda kwezvinhu zvisingaenzaniswi zvezvinhu zve graphene, senge: simba, kuomarara, hupenyu hwebasa, nezvimwe. Mumakore achangopfuura, graphene yanyanya kushandiswa. Kuti ubatanidze graphene mune yakasanganiswa zvinhu uye utambe chinzvimbo chayo, inofanirwa kuve yakapararira mune yega nanosheets. Iyo yakakwira iyo degree re deagglomeration, inowedzera pachena basa re graphene. Ultrasonic vibration inokunda iyo van der Waals simba ine yakakwira shear simba re20,000 nguva pasekondi, nokudaro pr ...
Ultrasonic pigment akapararira michina
Nguruve dzinoparadzirwa kuva pendi, machira, uye inki kuti zvipe ruvara. Asi mazhinji esimbi macompound mu pigments, senge: TiO2, SiO2, ZrO2, ZnO, CeO2 zvinhu zvisinga nyungudike. Izvi zvinoda nzira inoshanda yekupararira kuti ivaparadzire munzvimbo inoenderana. Ultrasonic yekupararira tekinoroji parizvino ndiyo yakanyanya nzira yekupararira. Ultrasonic cavitation inogadzira isingaverengeke yakakwira uye yakadzika maficha ekumanikidza mune emvura. Aya akakwirira uye akaderera ekumanikidza matunhu anoramba achikanganisa solid par ...